समाज Archives - Page 180 of 255 - Dna Nepal
पोखराको गगनगौंडामा महिला मृत फेला ! ११ आश्विन २०७५, बिहीबार ०२:०२
श्रेया हत्याकाण्ड–त्यो कुकुर, जसले घुमाई घुमाई कुशुमलाई फन्दामा पार्यो !
प्रकाश ढकाल पोखरा, असोज ११ । पोखराको पुम्दीभुम्दीमा मंगलबार मृत भेटिएकी श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको छ । छिमेकी कुशुम पौडेलले चक्लेट किन्ने पैसा दिएर उनको बलात्कार गरेको तथ्य खुलेको छ । कास्की प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन..
पैसा दिएर १० बर्षिया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, हत्या गर्ने कुशुमले के भने ? (भिडियो) १० आश्विन २०७५, बुधबार १२:४५
पोखरा, असोज १० । पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० बर्षिया वालिका श्रेया सुनारलाई स्थानीय कुसुम पौडेलले चक्लेट किन्ने पैसा दिएर बलत्कार गरी हत्या गरेको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कास्कीले बुधबार प्रहरी कार्यालय परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेललाई..
पोखरा, असोज १० । पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी पक्राउ परेका छन् । घटनाको २४ घण्टाभित्रै प्रहरीले मंगलबार राति २७ वर्षीय कुसुम पौडललाई पक्राउ गरेको हो । कुसुम सहित पाँच..
कसरी भयो श्रेयाको बलात्कार पछि हत्या ? (घटना विवरण)
पोखरा, असोज १० । पोखरा पुम्दीभुम्दीकी श्रेया सुनार मंगलबार मृत भेटिईन् । सोमबारदेखि बेपत्ता भएकी उनको शव घर नजिकैको झाडिमा भेटिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानबाट उनको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको छ । यद्यपी प्रहरीले औपचारिक रुपमा घोषणा गरिसकेको..
बलात्कारको आरोपमा विहे गर्दागर्दै दुलाहा पक्राउ परेपछि…
दोलखा, असोज १० । विवाह संस्कारअनुसार दुलाहा र दुलहीलाई घरमा भित्र्याउने तयारी गर्दागर्दै भीमेश्वर नगरपालिका जिलुमा बलात्कार आरोपमा दुलाहा पक्राउ परेका छन् । १६ वर्षीया किशोरीलई बलात्कार गरेको आरोपमा दुलाहा शान्ति चौलागाई बिहेको..
पोखरा, असोज १० । पोखरा २२ पुम्दीभुम्दी कोदीकी १० वर्षीया श्रेया बिक (सुनार) लाई बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कास्की प्रहरीले एक दिनमै समातेको छ । घटनापछि तत्काल अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले २४ घण्टा नपुग्दै सफलता हात परेको हो । श्रोतका अनुसार..
मृत भेटिएकी श्रेयाको पोष्टमार्टम, रिपोर्ट आउन बाँकी ९ आश्विन २०७५, मंगलवार १२:२८
पोखरा, असोज ९ । मंगलबार विहान मृत भेटिएकी पुम्दीभुम्दीकी श्रेया विकको पोष्टमार्टम गरिएको छ । दिउँसो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उनको पोष्टमार्टम गरिएको हो । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । यद्यपी स्थानीय अगुवाहरु यसलाई हत्या नै..
पोखरा, असोज ९ । पोखरा महानरगपालिका–२२ पुम्दीभुम्दीको कोदी भन्ने ठाउँमा मंगलबार सबेरै बालिका मृत भेटिइन् । १० वर्षीया श्रेया बिक (सुनार) हिजो साँझ साढे ६ बजेदेखि घर फर्केकी थिईनन् । आफन्तले राति सम्म खोजी गर्दा भेट्टाएनन् । तर बिहानै श्रेया मृत..